Guardiola Iyo Zinedine Zidane Oo Si Weyn Iskugu Diyaarinaya
Manchester City iyo Real Madrid ayaa si weyn iskugu diyaarinaya kulankooda August 7 ee lugta labaad ee wareegga 16ka tartanka Champions League ee ka dhici doonta garoonka Etihad Stadium, taas oo ku beegan maalinta Jimcaha.
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargaysyada Yurub Caawa Ka
Wariyihii Sheegay In Cristiano Ronaldo Loo Bandhigay
Kooxda tababare Guardiola oo horyaalka Premier League ay ka qaadday Liverpool, waxay kulankeedii ugu dambeeyey xili ciyaareedka kusoo xidhatay dhoolatus iyo weerar cajiib ah, iyadoo 5-0 ku karbaashtay Norwich City, waxaanay noqotay kooxda guud ahaan qaaradda Yurub ugu gool dhalinta badan xili ciyaareedkan.
City waxay soo dhalisay 102 gool, waxaanay dhaafeen tirada goolasha ay Bayern Munich is lahayd cidina ma dhaafi karto xili ciyaareedkan, taas oo ahayd 100 gool oo ay shabaqa soo taabsiiyeen fasal ciyaareedka dhowaanta dhamaaday oo ay ugu guuleysteen horyaalka Bundesliga iyo German Cup.
Weerarkan gool-dhalinta badan ee Manchester City, waxay waajihi doonaan difaaca ugu wanaagsan qaaradda Yurub xili ciyaareedkan ee Real Madrid, kuwaas oo goolashii ugu yaraa laga soo dhaliyey.
Los Blancos waxay xili ciyaareedkan ku guuleysatay horyaalka LaLiga Santander oo ay shaqadoodii u weynayd qabteen intii laga soo laabtay go’doonkii fayraska, waxaana bandhigga ugu wanaagsanaa sameeyey goolhaye Thibaut Courtois oo muujiyey sababta ay Real Madrid ula soo saxeexatay ee ay booska ugaga saartay Keylor Navas.
Waxa kale oo bandhig kale oo cajiib ahaa sameeyey Karim Benzema oo sababta ugu weyn ku lahaa guushii horyaalka ee Real Madrid ee xili ciyaareedka dhowaanta dhamaaday.
Labada kooxood waxay ku ciyaaraan laba falsafadood oo kala duwan, taas ayaanay mid walbaa la tegi doontaa Etihad Stadium Jimcaha soo socda, iyadoo ay farsamooyin, xeelado dheeraad iyo maskaxba ciyaartoyda ku kabi doonaan Pep Guardiola iyo Zinedine Zidane.’
Tababaraha reer France ee Zinedine Zidane, waxa uu kalsooni weyn siiyey Karim Benzema oo buuxiyey booskii Cristiano Ronaldo ee gool-dhalinta isla markaana qabsada shaqadiisii kale ee caawinta, kubbad dhisidda iyo culayska difaaca la saarayo intaba.
Rikoodhka goolasha ee Real Madrid aad ayuu uga hooseeyaa midka Manchester City, sababtoo ah, waxay ku kala duwan yihiin awoodda afka hore.
Halka Man City ay 102 gool kasoo dhalisay, Real Madrid waxa kaliya oo ay dhaliyeen 70 gool, hase yeeshee Los Blancos waxa shaqo layaab leh qabtay difaaca oo 25 gool oo kaliya laga dhaliyey, halka Man City ay shabaqeeda taabteen 35 gool.
City iyo Real Madrid waxyaabaha qaarkood ayay ka siman yihiin, waana sida ay goolasha u dhaliyaan oo ah inaan ciyaartoy gaar ah laga sugin inay shabaqa soo taabtaan, laakiin xiddig kasta oo kooxda ah ay waajib ku tahay inay goolal dhaliyaan.
Haddii aynu eegno City, Raheem Sterling ayaa ah ciyaartoygii ugu goolasha badanaa kooxda horyaalka Premier League, waxaanu soo dhaliyey 20 gool, waxaanu kaliya hal gool ka dambeeyaa Karim Benzema oo 21 gool u dhaliyey Real Madrid, isla markaana abaal-marinta kabta dahabka ah ee Pichichi Trophy ku cidhiidhyey Lionel Messi oo Is-aaragii ugu dambeeyey ka baxsaday.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada kooxood wuxuu yahay, in City ay haysato ciyaartooyo badan oo goolal badan soo dhaliyey, mar walbana halis ku ah goolhayeyaasha. Tusaale ahaan, Raheem Sterling oo 20 gool dhaliyey waxa ku xiga Sergio Aguero oo 16 gool dhaliyey, Gabriel Jesus oo 14 gool dhaliyey halka uu Kevin de Bruyne 13 gool u dhaliyey.
Intanba marka laga yimaaddo, waxa isaguna 11 gool dhaliyey Riyad Mahrez, iyadoo ay 13 ciyaartoy oo Manchester City ah ay goolal badan soo dhaliyeen, sida Bernardo Silva (lix gool), David Silva (Lix gool), Phil Foden (shan gool), Rodri Hernandes (saddex gool), Ilkay Gundogan (laba gool), Nicolas Otamendi (laba gool), Kyle Walker (hal gool) iyo Aymeric Laporte (hal gool)
Real Madrid, waxa xaqiiqo ah in iyaduba ay 21 ciyaartoy goolal usoo dhaliyeen, isla markaana ay Eder Militao iyo Brahim Diaz oo kali ahi aanay shabaqa taabanin, hase yeeshee, waxay kooxda Zidane ku hoosaysaa tirada goolasha ay laacibiinteedu dhaliyeen. Tusaale ahaan, Karim Benzema oo 21 gool dhaliyey, waxa ku xiga Sergio Ramos oo 11 gool dhaliyey iyo labada AxadleTM ee Casemiro iyo Toni Kroos oo min afar gool saxeexay.
Vinicius Junior iyo Marco Asensio, waxay dhaliyeen min saddexgool, Rodrygo Goes, Luka Jovic, Gareth Bale iyo Lucas Vazquez waxay saxeexeen min laba gool, halka Eden Hazard iyo Martiano Diaz ay min hal gool usoo dhaliyeen.
Isco iyo James Rodrgiuez oo la barbar-dhigayo De Bruyne marka laga eego booska ay ka ciyaaraan oo ay isku mid ka yihiin, waxa uu mid waliba dhaliyey hal gool, halka uu Luka Modric saddex gool soo dhaliyey iyo Fede Valverde oo laba gool ku daray.
Real Madrid waxay u baahan tahay inay ugu yaraan laba gool dhaliso, shabaqeedana ilaashato si ay Man City uga reebi karto tartanka Champions League, waxaanu Zidane rajaynayaa in Hazard uu kula soo laaban doono xaalad wanaagsan, halka Vinicius iyo Asensio uu usii carbinayo sidii ay difaaca City garbaha uga soo geli lahaayeen.
Sidaas oo kale, Man City ayaa u baahan inay kaliya shabaqeeda ilaashato ama aan laga dhalin wax ka badan hal gool si ay ugu soo baxdo wareegga siddeedda, haddii ay goolal dhalisana waxay xilli horeba burburinayaan rajo kasta oo Zinedine Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid ay ka qabeen inay hore ugu socdaan koobka.
axadle 3932 posts
EU ministers comply with new spherical of sanctions on…
Nigeria convicts first pirates below new anti-piracy…